Boorsada qorraxda: waa inay ahaataa mid farshaxan u ah safarka - Dongguan Zhihao Handbag Industry Co., Ltd.
Guri > Warka Warshadaha > Boorsada qorraxda: waa inuu lahaadaa farshaxanka safarka
Boorsada qorraxda: waa inuu lahaadaa farshaxanka safarka
Telefoonada casriga ah iyo aaladaha kale ee mobilada ayaa gebi ahaanba bedelay qaabkii aan ula xiriiri jirnay qoyskeena iyo asxaabteena. La'aanta taleefannada casriga ah, way kugu adag tahay inaad halista uga baxdo guriga. Masiibada ugu weyn ayaa ah in batteriga casriga ah uu si dhib leh ku sii socdo maalin aan lacag la soo dallacsiin. Haddii aysan jirin meel koronto u dhow, aaladda wax yar baa laga isticmaalayaa. Tani waa dhibaato weyn haddii aad ku safreyso meelo fogfog, baaskiil wadid ama socod dheer. Waxaad ubaahantahay hab lagu kalsoonaan karo oo aad kusii haysato taleefannada casriga ah iyo aaladaha kale (sida kiniinnada iyo laptops) had iyo jeer lagaa qaado Tani waa dhab ahaan waxa boorsada qorraxda ay qabato.
Boorsada qorraxda ayaa leh 7-watt qoraxda oo ka qaadi kara 10,000 mAH batari lithium polymer ah oo aan biyuhu soo gaarin. Qalabka qoraxda sidoo kale waa la dhaqaajin karaa, markaa waad u tilmaami kartaa goob kasta, taas oo u dhiganta saldhigga wax lagu qaato ee boorsadaada ku yaal. Waxay tamarta qoraxda u rogtaa tamarta tooska ah ee hadda jirta (DC) si ay uga qaaddo aaladaha mobilada. Tani waa qalab weyn.
Faa'iidooyinka boorsada qorraxda
Haddii aad ku soconaysid qorraxda, maxaad u oggolaan weyday Dabeecadda Hooyo inay kaa badbaadiso baytariyada dhimatay? Xilligan macluumaadka iyo isku-xirnaanta bilaa-waayirka ah, ku dhowaad qof kastaa wuxuu adeegsadaa taleefannada gacanta, kumbuyuutarrada, Ipod-yada, laptop-yada, sameecadaha la qaadan karo iyo qalabka kale ee elektarooniga ah Dhammaan aaladahaan waxay u baahan yihiin in si joogto ah loogu dalaco si ay ugu sii shaqeeyaan sidii la filayay. Nasiib darrose, markasta uma dhowaanno korontada. Boorsada qorraxda ayaa xallisa dhibaatadan adiga oo ku siinaya saldhig lacag-qaadasho oo la qaadan karo ah. Waad isticmaali kartaa saldhigga lacag-bixinta wakhti kasta iyo meel kasta, illaa aad ku nooshahay gobollada cirifka ah, waad isticmaali kartaa inta badan.
Xidhmada batteriga ku shaqeeya cadceedda asal ahaan waa boorsadaada caadiga ah, laakiin waxaa ku dhegan leerarka cadceedda ku shaqeeya. Gudigu wuxuu bixiyaa hab ku habboon oo loo isticmaalo tamarta qorraxda si loogu isticmaalo aaladda. Xitaa waad ku dallaci kartaa baakidhka batteriga inta lagu jiro maalintii oo aad u isticmaali kartid inaad ku xoojiso qalabkaaga habeenkii.
Waad weydiin kartaa, maxaad u qaadan weyday bangiga korontada iyo aaladda? Waa hagaag, iyada oo ku saleysan khibrad, sahayda korantada moobiilku waxay siisaa siyaado dheeraad ah, koronto la qaadi karo, laakiin sidoo kale waxay leeyihiin xaddidaadyo. Haddii aad gebi ahaanba ku tiirsan tahay awoodda mobilada, waxaad u baahan tahay inaad aad uga taxaddarto sida loo isticmaalo aaladda. Tani ma aha kiiska baakadaha qoraxda ku shaqeeya. Waxay baabi'ineysaa dhammaan walwalka ku saabsan in qalabku kaa dhammaado.
Dongguan Zhihao Shandada Warshadaha Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 2003. Ganacsigeena ugu weyni waa naqshadeynta, soosaarka iyo iibinta alaabada boorsada. Shaqaalaheena 600 iyo 500 mashiinada wax soo saarka ayaa ah hantida ugu weyn. Sideen horay usii joogi karnaa? Waxaan qiimeyneynaa isku xirka dadka, ilaalinaa xuquuqda aadanaha ee shaqaalaha iyo inaan ilaalino xuquuqda macaamiisha. Aqoon isweydaarsiga 18,000 mitir murabac ah wuxuu noo ogolaanayaa inaan meel dhigno qalab badan oo wax soo saar iyo shaqaale wax soo saar leh, waxaanan macaamiisha siineynaa naqshadeyn wax soo saar, wax soo saar muunad ah, wax soo saar ballaaran, saad xamuul iyo adeegyo caddeynta kastamka
Hore:Boorsooyinka safarka ee ugu fiican: wareeg dhammaystiran oo loogu talagalay 2021